रिहाई लगत्तै घरबेटी सरस्वती प्रधानले गरिन् यस्तो खुलासा, यस्तो रहेछ वास्तविकता ! - Nepali in Australia
रिहाई लगत्तै घरबेटी सरस्वती प्रधानले गरिन् यस्तो खुलासा, यस्तो रहेछ वास्तविकता !
June 23, 2021 autherLeaveaComment on रिहाई लगत्तै घरबेटी सरस्वती प्रधानले गरिन् यस्तो खुलासा, यस्तो रहेछ वास्तविकता !
नागको अन्डा देख्ने मान्छेको भाग्य चम्किने ? भेटी स्वरुप ॐ लेखी सबैले सेयर गरौ….
मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो । अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो ।
प्रकृतिका विविधरुपलाई फरक फरक शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको विश्वासमा वहुदेववादको कल्पना गरियो ।अतः विश्वको हरेक सभ्यतामा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ । आदिम सभ्यताको उत्खननबाट प्राप्त पुरातात्विक सामाग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृतिपूजक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्यावरण अनुसार पूजा, उपासना र साधना पद्धति फरकफरक हुन्छ । हिन्दू धर्म र दर्शनमा प्रकृति लगायत समस्त विश्वकल्याणको लागि उपासना र प्रार्थाना गरिन्छ । यस्ता उपासना र अनुस्ठानको भित्रि उद्धेश्य वातावरणीय र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्ने रहेको देखिन्छ ।
अक्सिजन निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध हट्यो, शनिबार दुई ट्यांकर अक्सिजन आउँदै
बन्दको नाममा ट्याक्सी ज’लाएको भन्दै विरोधमा उत्रिए ट्याक्सी व्यवसायी